Izindaba - Ukwethulwa Komkhiqizo Wamaphayiphu wePolypropylene (PP-R) wamanzi ashisayo namakhaza
Iyini ithubhu ye-PP-R?
Ipayipi le-PP-R libizwa nangokuthi izinhlobo ezintathu zepayipi le-polypropylene. Yamukela okungahleliwe kwe-polypropylene polypropylene okumele kukhishwe kuyipayipi, bese kufakwa umjovo ngepayipi. Luhlobo olusha lomkhiqizo wepayipi lepulasitiki othuthukiswe futhi wasetshenziswa eYurophu ekuqaleni kwawo-1990. I-PP-R ivele ngasekupheleni kweminyaka yama-80s, isebenzisa inqubo yegesi yesigaba se-copolymerization ukwenza cishe u-5% PE ku-chain yamangqamuzana e-PP ngokungahleliwe nangokufana ngokulinganayo (ukwenza okungahleliwe) ukuze kube yisizukulwane esisha sezinto zepayipi. Inokumelana okuhle komthelela nokusebenza kwesikhathi eside.
Yiziphi izici zamapayipi e-PP-R? Ipayipi le-PP-R linezici ezilandelayo eziyinhloko:
1.ngeyona into enobuthi nenhlanzeko. Ama-molecule aluhlaza we-PP-R angama-carbon ne-hydrogen kuphela. Azikho izinto eziyingozi nezinobuthi. Zinenhlanzeko futhi zithembekile. Azisetshenziswa kuphela emapayipini amanzi ashisayo namanzi abandayo, kodwa futhi zisetshenziswa ezinhlelweni zamanzi okuphuza ezimsulwa.
Ukulondolozwa kwe-2.Heat nokonga amandla. Ukuqhutshwa okushisayo kwepayipi le-PP-R ngu-0.21w / mk, okuyi-1/200 kuphela yalokho kwepayipi lensimbi.
3.good ukumelana nokushisa. Indawo yokuthambisa ye-vicat yethubhu le-PP-R ingu-131.5 ° C. Izinga lokushisa eliphakeme lokusebenza lingafinyelela kuma-95 ° C, angahlangabezana nezidingo zamanzi ashisayo ekwakheni ukunikezwa kwamanzi nokucaciswa kwamanzi.
Impilo 4.Long service. Impilo yokusebenza kwepayipi le-PP-R ingafinyelela eminyakeni engaphezu kwengu-50 ngaphansi kokushisa okusebenzayo okungama-70 ℃ nokucindezela kokusebenza (PN) 1.OMPa; impilo yenkonzo yokushisa okujwayelekile (20 ℃) ​​ingafinyelela eminyakeni engaphezu kwengu-100.
Ukufakwa okungu-5 nokuxhumeka okuthembekile. I-PP-R inokusebenza okuhle kwe-welding. Amapayipi nokufakwa kungaxhunywa nge-hot-melt ne-welding kagesi, okulula ukuyifaka nokunokwethenjelwa emajoyintini. Amandla wezingxenye ezixhunyiwe mkhulu kunamandla wepayipi uqobo.
Izinto ezisetshenziswayo zingaphinde zenziwe kabusha. Imfucuza ye-PP-R iyahlanzwa futhi ichotshozwe iphinde isetshenziselwe ukukhiqizwa kwamapayipi namapayipi. Inani lezinto ezenziwe kabusha alidluli ku-10% wenani eliphelele, elingathinti ikhwalithi yomkhiqizo.
Yimuphi umkhakha wesicelo oyinhloko wamapayipi e-PP-R?
1. Amasistimu wamanzi abandayo namanzi ashisayo, kufaka phakathi amasistimu okushisa aphakathi nendawo;
Isistimu yokushisa esakhiweni, kufaka phakathi uhlelo lokushisa, phansi kanye nokushisa okukhazimulayo;
3.Pure amanzi uhlelo ukuphuza ngqo;
Uhlelo oluphakathi (oluphakathi nendawo) lokupholisa umoya;
5.Izinhlelo zamapayipi ezokuthutha noma zokuhambisa imidiya yamakhemikhali.